5 Famous Theaters In Europe | Sevha Chitima Kufamba Europe
musha > Travel Europe > 5 Famous Theaters In Europe
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 14/02/2020)
Famous Theaters mu Europe dziri yakarukwa chinokosha European tsika. Famous dzemitambo mu Europe anovimbisa imi zvesimba anoshamisa. It achasiya iwe vakamutsa, rakanyonganiswa uye spellbound! Hunhu kuita unyanzvi hupfupi zvinhu uye anokura spectacularly. kupenya aya uchenjeri kurarama chete mundangariro dzedu. Famous dzemitambo mu Europe kusika pfungwa exclusivity uye husiri nyore kuwana. Zviri kwenguva duku nokuitawo nguva, uye uchada patinodziya mushana, patinoravira chiedza chawo sokupenya.
Iyi mimwe yedu pamusoro mapiki zvikuru dzemitambo ukurumbire Europe, Zvinongoreva vanofanira-Anoona kuti tsika anoda:
1. Theatre Alla Scala, Itari
Zvine musoro chete kuti isu yaizotanga muna Italy, munhu munodzora simba pamusoro nomukurumbira dzemitambo mu Europe. The Theatre alle Scalla ndiyo musha nyika yakakurumbira of Italian Opera.
Vazhinji vaimbi zvikuru kare, pamusoro okupedzisira mazana maviri nemakore, makachengeta pano. operas zhinji wakakurumbira vakambova kugadzirwa wavo wokutanga pano akadai Othello, Nabucco kubudikidza Verdi uye Madame Butterfly kubudikidza Giacomo Puccini.
mitambo iyi Mukuru uye akanaka. It ane miziyamu yaunogona peruse nzvimbo private kuti havasi kazhinji yakazaruka kuruzhinji. Tichitarisa odhitoriyamu inovakwa kubva huni uye akafukidza dzakaora dzvuku vherevheti. It uzere pedyo Bohemian sekristaro chandelier.
The Globe Theater rinozivikanwa Shakespeare Globe. Usingagoni kuguta Fans The Bard anofanira kushanyira ichi yemitambo yakakurumbira Europe. William Shakespeare mabasa vanoratidza kunzwisisa vanhu zvakadzama. basa captivates ake nevaimuteerera. Kukunda kwake mutauro Chirungu akaita mitambo ake uye nhetembo isingachinji zvimedu shasha.
Kana iwe uri munhu anoda Shakespeare, ichi ndechimwe ari nzvimbo kushanya! Ishe varanda Men akaipisa pasi 1613. The ano rokuvakazve kuti anomira panzvimbo yayo nhasi chinhambwe kubva nzvimbo yaro yepakutanga.
Uyai ichi nenhurikidzwa nhatu, panze dzemitambo kunakidzwa Mitambo. Vanodya mumusangano. Gara-pamusoro hurukuro uye kufanorongwa kuverengwa. Pane zvakanaka vaipinda chinoshamisa chepanzvimbo chirongwa gore rose uye kunokosha pandandanda nomukurumbira dzemitambo mu Europe.
The Paradis Latin ndiro akararama cabaret vakatozodzokera kuti ndiye mutsivi yemabviro Latin Theater. The Latin Theater paakatumwa Pakutanga nokuda mumwe kupfuura Napoleon Bonaparte ari 1800s.
Zvivako zhinji kupiswa pasi panguva iyoyo. Izvi zvinosanganisira uyu. Raizivikanwa glitz uye flair, saka kana uri kutsvaga kusina, uchazviwanazve panguva bonafide Parisian cabaret anoratidza. Pachiimbwa hunoshamisa cabaret zvesimba, unogona kuona chaizvo Acrobatic uye trapeze mabasa.
The Volkstheater muVienna ari akanaka pameso kuti tarisai. Kutanga yakavhurwa 1889. Zviri mumwe kupfuura mhando yayo munyika chiGerman nyika uye ari anofanira kuona.
Built somunhu nyore ishamwari kuna Burgtheater, yakanga rakasarudzwa vakatozodzokera panguva vapamatunhu muvanhu asi kuita Arts ndechokuti vose vanakidzwe. Pakatanga ichi mbiri yemitambo, pfungwa yaiva yeAustria vanyori. nhasi, unogona kuva chapupu kuti rakakura repertoire Unogamuchira kurumbidzwa dzakawanda.
The red Bar ari yokumusoro pauriri yemitambo. Zviri pachena kuti neyebhizimisi vakatozodzokera. Zviri pano kuti unogona kuteerera ambient mumhanzi, vanonakidzwa tsvimbo zviitiko uyewo kuverenga uye wepanguva kuratidzira.
Hazvishamisi kuti National Theater muPrague yave remadunhurirwa, The Golden Chapel. It anomira muchizvikudza zvose zvayo Neo-Renaissance kubwinya. Uchanzwa sezvinoita uripowo kwamachinda pachako kana iwe kushanyira ichi yemitambo yakakurumbira Europe.
The National Theater iri akapfuma munhoroondo asi chivako yepakutanga vakapisa pasi 1881. An rwose vakaungana pamwe chete pakutsigira kuita hwemashiripiti. Ivo vakabatsira nayo kuvakwazve uye kuva nahwo chaizvo sezvo kamwe yakanga.
nhasi, uyai muone zvinoshamisa siyana ballets, Mitambo, uye operas zvinokurudzira uye vanofarira, uye chokwadi, kubata motokari pamwe Save A Train kuti ikoko!
Unoda embed yedu Blog romukova “5 Famous Theaters In Europe” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/famous-theatres-europe/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#mitambo ParadisLatin kuita Teatro alla Scala mitambo TheGlobeTheatre Train Travel Volkstheater